Iko kuchengetedzwa kweese aruminiyamu muviri kunovimbiswa maitiro ekugadzirisa |
Aluminium inokanganwa yepamusoro-pfumo
Zvemota aluminium kukanganwira
Aluminium inokanganwira yemachira
Aluminium kukanganwira kwemudhudhudhu
Imwe aruminiyamu Forg
Kushandisa michina michina nenhumbi
Aviation aluminium kukanganwira
Industrial aruminiyamu Forg
Iyo tambo yemota accessories
Iko kuchengetedzwa kweese aruminiyamu muviri kunovimbiswa maitiro ekugadzirisa
Indasitiri ine simba
Iko kushandiswa kwealuminium mumotokari kunoratidza kuwedzera kuri kuitika gore negore. Kune akawanda mamodheru anoshandisa aluminium muchikamu kana yakazara. Iyo mota yekufambisa system INOSHANDISA zvinhu zvealuminium, izvo kwete chete zvine simba rakakwana uye kuomarara, asi zvakare zvine yakanaka yekupisa conductivity. Chokwadi chakaratidza kuti kushandiswa kwealuminium mumotokari zvechokwadi kwave nekuwana zvakanaka munzanga neupfumi.
Zvemotokari aruminiyamu chiwanikwa chengetedzo
1, aruminiyamu inounza zvayakanakira, simbi yakakoshawo
Sezvinozivikanwa kune vese, zvichienzaniswa neyakajairika simbi, aruminiyamu zvinhu zvinogona kufungidzira zvirinani kudhumhana mamiriro pakutanga dhizaini, uye kuve nechokwadi chimiro uye yakachengetedzwa nzvimbo yekurovera. Naizvozvo, aruminiyamu muviri unogona kuvandudza mota chengetedzo kune imwe nhanho uye kuita zvirinani kuita mune yekukanganisa bvunzo.
Kunyangwe imwe yezvibereko simba realuminium alloy inogona kusvika inopfuura 500-600 mpa uye inokwikwidza yakajairika simbi simbi zvikamu, asi mune rimwe rakakosha simba, zvakadaro haina kuita senge yakasimba yesimba rakasimba simbi, saka mune zvimwe zvikamu zvakakosha zvinoshandisa zvakare yakasimba simbi simbi yekusimbisa, senge renji rover aluminium muviri, ine 4% yesimba rakasimba simbi uye 1% ye thermoforming Ultra-yakakwira simba simbi.
2, kudzora uremu braking optimization, chengetedzo kudzora kune yakakwira nhanho
Muchokwadi, iko kuchengetedzwa kwemuviri wealuminium hakuratidzwe chete muchimiro uye hunhu hwehunhu, asi zvakare inoita basa rakakura mukubata nekubata mota. Rori yaF-150 yeF-150, semuenzaniso, inorema 318kg yakaderera pane yaakatangira nekuda kweayo ese-aluminium muviri. Inertia yemotokari yakaderedzwa zvakanyanya uye iyo braking daro yakadzikiswa zvakanyanya. Ndosaka F-150 inowana yakakwira-nyeredzi-shanu chengetedzo chiyero kubva kuNational Highway Traffic Safety Administration, iyo inoipa yakakwira yakachengetedzwa chiyero kupfuura mhando dzakaenzana. Uye nekuda kwekuti aruminiyamu ine hunhu hwekudzivirira ngura, inogona kupa mota hupenyu hwakagadzikana.
Zvigadzirwa zvemidziyo zvekuchengetedza muviri wealuminium
1.Gesi yakakoshwa inodzivirirwa nemuchina uye chimiro chekugadzirisa muchina wealuminium muviri
Nekuda kwenzvimbo yakadzika yekunyunguduka yealuminium, deformation iri nyore, zvinodiwa nemoto wepasi pazvino, saka inofanirwa kushandisa yakakosha aluminium muviri gasi inodzivirirwa yekutengesa muchina. Shape yekugadzirisa muchina haigone kunge yakajairwa chimiro yekugadzirisa muchina kudzvanya uye kudhirowa, inogona chete kushandisa yakakosha aluminium muviri chimiro kugadzirisa muchina kutenderera muon chipikiri, uchishandisa muon chipikiri pakamubhedha kudhirowa.
2. Anokosha aruminiyamu muviri ekugadzirisa maturusi uye ane simba riveting pfuti
Zvakasiyana neyechinyakare tsaona yekugadzirisa mota, iyo yekugadzirisa yealuminium muviri inowanzo neiyo riveting nzira, iyo inofanirwa kuve ine yakasimba riveting pfuti. Uye kugadzirisa aruminiyamu emidziyo yemuviri inofanirwa kuve yakatsaurirwa, haigone kusanganiswa nekuchengetedza kwesimbi yemuviri maturusi. Mushure mekugadzirisa muviri wesimbi, simbi yakasara inosara pane maturusi. Kana ikashandiswa kugadzirisa iyo aluminium muviri, simbi yakasarudzika inoiswa mukati memvura yealuminium, zvichikonzera kuora kune iyo aluminium.
3. Kuputika-chiratidzo guruva kuunganidza uye kupukuta system
Mukuita kwekukwiza muviri wealuminium, pachave yakawanda yealuminium poda, poda yealuminium haina kukuvadza chete kumuviri wemunhu, asi zvakare inogona kupisa uye kuputika, saka zvinodikanwa kuve nekuputika-chiratidzo guruva kuunganidza uye yekuchenesa system tora aluminium poda munguva.
4. Nzvimbo yakazvimiririra yekuchengetedza
Nekuda kwezvakasimba zvinodiwa nealuminium kugadzirisa muviri maitiro, kuve nechokwadi chekuchengetedza mhando uye nekuchengetedza mashandiro ekuchengetedza, kudzivirira aluminium poda kune yemusangano kusvibiswa uye kuputika, zvinodikanwa kuti ugadzire yakasarudzika aluminium muviri yekugadzirisa chiteshi. Uye zvakare, vashandi vemualuminium ekuchengetedza muviri kuita hunyanzvi hwekudzidzira, kugona kugadziridza kwealuminium yekuchengetedza muviri maitiro, maitiro ekuisa kudhirowa, kutenderera, riveting, kubatana uye nezvimwe.
Cherechedzo yealuminium yekuchengetedza muviri oparesheni
1, aruminiyamu chiwanikwa ndiro yemukati tensile haina kunaka, nyore kutsemuka. Semuenzaniso, nekuti chimiro cheplate yemukati yeinjini hood yakanyanya kuomarara, kuitira kugadzirisa tensile deformation mashandiro emuviri panguva yekugadzirwa kwesimba-yakasimba aruminiyamu chiwanikwa, iko kukwirisa kwakapfuura 30%, saka mukuchengetedza. kuve nechokwadi chekuti chimiro hachichinje sezvinobvira, kuitira kudzivirira kupaza.
2. Dhiimendi kurongeka hakusi nyore kubata, uye kudzokorodza kwakaoma kudzora. Maitiro ekuburitsa kunetseka nekudziya kwakadzika tembiricha anofanirwa kutambirwa nepazvinogona napo mukugadzirisa kuti igadzikane pasina yechipiri deformation phenomena senge springback.
3, nekuti aruminiyamu yakapfava pane simbi, kurovera uye kwakasiyana-siyana guruva kunamatira mukugadzirisa kunokonzeresa kukuvara kwenzvimbo, kukwenya uye zvimwe zvikanganiso, saka zvinodikanwa kuti uite yekuchenesa chakuvhuvhu, midziyo yekuchenesa, guruva rezvakatipoteredza, kusvibiswa kwemhepo uye zvimwe zvinhu. tora matanho akakodzera kuve nechokwadi chekuvimbika kwezvikamu.
Nekuda kwekuita kwayo zvakanaka, aruminiyamu chiwanikwa chinonyanya kushandiswa mumuviri wemotokari, kuchengetedzwa kwealuminium alloy kunogona kuvimbiswa. Pamusoro pezvo mota yekuchengetedza muviri zvakare iri nyore, kune rumwe ruzivo ndapota taura nesu.
Kunshan Chenshun aruminiyamu nokuchengetedza Co., LTD